MSFS 2020 Abriil 1st, 2021 Cusboonaysiinta Cusboonaysiinta
Fursada Imtixaanka Soo Socda
Dadaalkayaga joogtada ah ee aan ku bixinayno waayo-aragnimada ugu fiican ee bulshadeena waxaan raadineynaa 300 qof si ay nooga caawiyaan inaan tijaabino Cusboonaysiinta Dunida ee soo socota IV. Iyada oo qayb ka ah tijaabadan kaqeybgalkaagu wuxuu ka caawin doonaa kooxdayada inay soo uruuriyaan macluumaad qiimo leh ka hor intaanay bilaabin cusbooneysiinta adduunka soo socda ee dadweynaha guud. Waxaan qorsheyneynaa inaan u furno saxiixyada berrito 8da subaxnimo PDT. Halkan dib u hubi waqtigaas wixii tilmaamo ah iyo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida looga qayb qaato!
Cajiib ah Microsoft dayuuradda duulista Filim, waxaa soo saaray oo tifaftiray Duulimaadka X:
Waxaan ku darnay shaybaarrada xaydha.
Waxaan u kala qaadnay "Dukumiintiga" tabka ku jira DevMode 2 xiriiriye: "Furan maxalli," si aad ugu furto faylasha aad ku soo dejiso cusbooneysiintaada SDK, ama "Furan khadka tooska ah," taas oo kuu horseedi doonta docs.FlightSimulator.com. Tan dambe waa inay noqotaa tan ugu casrisan, inkasta oo aan isku dayeyno inaan iska ilaalino kala duwanaanshaha u dhexeeya.
Iyadoo la socota cusbooneysiinta soo socota, waxaan u dirnay saaxir koowaad, kaas oo si toos ah u abuuri doona faylasha XML ee garoomadaada cusub ee la abuuray.
Waxaan hagaajinay shil markii aan ka baxeyno "hal-guji meel" oo daaqada guryaha laga arki karo.
Waxaan hadda soo bandhigeynaa jilitaannada xawaaraha wareegga. Waxaa lagu heli karaa cusbooneysiinta xigta!
Muunada SimVarWatcher waa la cusbooneysiiyay si loogu daro SimVars iyo Units oo dhawaan lagu daray.